ဖက်ရှင်နဲ့အလှအပလနောက်ပြီး 2017 - အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင်, crystals နှင့် patterned
လက်သည်းဒီဇိုင်းအမျိုးသမီးတွေကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာသောအဓိကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 2017 ခုနှစ်တွင်မွန်းနောက်ပြီးဒီနှစ်လက်ရှိလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်စဉ်းစားသည်ဖက်ရှင်သင့်လျော်သောအရသာက select လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်အကြားကွဲပြားခြားနားသောအပွောငျးအလဲ, တင်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
မွန်းနောက်ပြီး 2017 - ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
ယခုနှစ်တွင်အဆင်းလှသောလိင်လက်သည်းဒီဇိုင်းကို "လနောက်ပြီး" ဖန်တီးသောအခါအပြည့်အဝကသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသောနေကြသည်။ သင်တို့သည်ဤနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းရွေးနိုင်သည်, သူလိုက်နာရမည်:
မှုန်ခြင်းနှင့်ရတဲ့အရာတွေကုတ်အင်္ကျီ၏ပေါင်းစပ်။ အစောပိုင်းက အကယ်. အဲဒါကိုအလွန်ကြိုဆိုသည်လက်ရှိကာလ၌သူတို့ပေါင်းစပ်ဖို့အကြံပြုမခံခဲ့ရပါဘူး။ ဤသည်ကိုပေါင်းစပ်အလွန်ပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်မူရင်းကြည့်;
တောက်ပခြင်းနှင့်တိတ်ဆိတ်တန်ချိန်များ၏ပေါင်းစပ်ကြိုဆို, သူတို့သည်အလားတူဖြစ်သင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အားလုံးကိုအကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်မြအလင်းအစိမ်းရောင်;
ပစ္စုပ္ပန်နှင့် "လ" နှင့်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လနောက်ပြီး 2017 ဂျာကင်အင်္ကျီ ကလက်ရှိနှစ်တွင်စဉ်းစားသည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သန့်စင်ပြီးနှင့်သက်ဆိုင်ရာပါ၏
လူကြိုက်အများဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲကတစ်ခုကောင်းစွာဖန်ဆင်းအပြန်အလှန်ပါရှိသည်သောလနောက်ပြီးအပေါ်ယံပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အဲဒါကိုကြော့ရှင်းများနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများပေးသော, သိမ်မွေ့ဆိုးဖြစ်သင့်သည်။ ထိုသို့သောစွမ်းဆောင်ရည် technique ကိုတိုတိုအရှည်များအတွက်စံပြဖြစ်ပါသည်, ကအမြင်အာရုံကပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုစေရန်ကူညီပေးသည်။
ယခုနှစ်တွင်အလွန်အမင်းအရေးကြီးသည် retro-စတိုင် အနီရောင်ယွန်း၏အရိပ်သုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်သော။ သငျသညျအနီ, burgundy, ချယ်ရီအရောင်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဂန္ထဝင်လနောက်ပြီးအောက်ပါလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရပါမည်:
အနီရောင်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ aligned ရေတွင်းများအတွက် shaded မဟုတ်လူကြိုက်များ;
အများဆုံးသဘာဝထပ်ဖွနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့် "လ" အများဆုံးကတော့လက်သည်းပန်းကန်၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ဒါကြောင့်မျိုးပွားဖို့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည့်ကာဘဲဥပုံမူကွဲ, ရွေးချယ်ဖို့ဦးစားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပေသည်။
ဖက်ရှင်အတွက်ပျော့ pastel အရောင်များ, ဒါပေမယ့်လည်းပုံရိပ်ပြတ်သားပေးပါသောသူတို့သညျမသာဖြစ်ကြသည်။ တစ်လနောက်ပြီးအတိုလက်သည်းကိုဖန်တီးရန်စံပြဖြစ်သည့်ထိုကွောငျ့, အမှန်တကယ်အနက်ရောင်အရောင်။ ထိုသို့သောအရောင်အဆင်းကိုပေါင်းစပ်သုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်:
ထွက်ရှိသောပျော့ပျောင်း Beige နှင့်အတူပေါင်းစပ်;
သဟဇာတရူပ, အနက်ရောင် pastel အင်္ကျီနှင့်အတူအသုံးပြုသည်ဆိုပါက: အလင်းပန်းရောင်, ပူစီနံ, ဖြူဖပ်ဖြူရောအပြာ;
ဂန္တောက်ပအနက်ရောင်နဲ့အနီရောင်၏ပေါင်းစပ်လည်းမရှိသည့်အတွက်လနောက်ပြီး 2017 ဖြစ်လာသည်ပေး;
Black ကလက်သည်းပန်းကန်သူတို့အပေါ်မှာ "လ" ပုံဆွဲခြင်းနှင့်ပန်းချီနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်ရင်ခုန်စရာပုံရိပ်ဖန်တီးချင်သူမင်းသမီးသည်, စုံလင်သောအဆင်းလှလနောက်ပြီးပန်းရောင်အတွက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ပေါင်းစပ်အလားတူနှင့်အတူခွင့်ပြုခဲ့ pastel ရိပ် , အဖြူရောင်သို့မဟုတ်ပွင့်လင်းအပေါ်ယံပိုင်း။ အဆိုပါအလှဆင် element တွေကိုအမျိုးမျိုးသော crystals, ကျောက်, တောက်ပနေနှင့် sequins သုံးနိုငျအဖြစ်။
ထွက်ရပ်နှင့်တစ်ဦးမမေ့နိုင်သော image ကိုဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်, အမျိုးသမီးကွဲပြားခြားနားသောအတွေးအခေါ်များလနောက်ပြီးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်အတွက်ဣနြေ္ဒကိုသဘာဝမူကွဲ, ဒါပေမယ့်လည်းကွဲပြားခြားနားသောထုတ်နှင့်အတူအလှဆင်လက်သည်းအနုပညာ, မသာဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သေချာပေါက်အဆိုပါ wizard ကို၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုမသုံးကြဘူး, သင်တို့ကွဲပြားခြားနားသောတံဆိပ်များအားဖြင့်လွတ်လပ်စွာ image ကိုထားနိုင်ပါတယ်။ လူကြိုက်အများဆုံး options များပါဝင်သည်:
ပြောင်း strips တွေ။
အားလပ်ရက်နှင့်ပါတီများအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောသောပြောင်ပြောင်တောက်နှင့်ကြော့ image ကိုဖန်တီးပါ, sequins နှင့်အတူလနောက်ပြီးကူညီပေးပါမည်။ သူကကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုထားတဲ့အများအပြားမူကွဲ, တင်ဆက်:
sequin အကျိုးသက်ရောက်မှု "လ" ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အထူးသတ္တုပါးဖြင့်ရရှိသောနိုင်ပါသည်;
လက်သည်းပြား coated နှင့်အထူးအရောင်တောက်တွေဖြစ်တဲ့အလှဆင်ဘို့ရည်ရွယ်။
Matte လက်သည်းအနုပညာများစွာကိုရာသီအဘို့အတော်လေးရေပန်းစားသည်။ ယခုနှစ်တွင်သူနေဆဲလိမ်းပေမယ့်အကောင့်သို့အောက်ပါအတိုင်းနေသောအချို့သောတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ, ယူရန်အကြံပြုသည်တစ်ဦးဒီဇိုင်းကိုဘယ်အချိန်မှာလနောက်ပြီး 2017 လက္ခဏာတချို့လတ်ဆတ်နှင့်မူရင်းစိတ်ကူးများရှိခဲ့:
အရိပ်ကအများဆုံးအကျိုးရှိ option ကိုအောင်ကူညီပေးပါမည်, ကြွယ်ဝသောအရည်ရွှမ်းကောက်သင့်သည်,
အပြာလနောက်ပြီးရာသီတစ်ခု undoubted hit စဉ်းစားသည်။ နောက်ဆုံးရလုံးဝအားလုံးအရောင်များ: ဆံပင်ရွှေရောင်တောက်ပ, မှောင်မိုက်။ ဒါကအပြာရောင်ကိုဘော့, cornflower, နီလာ, ultramarine ဖြစ်နိုင်သည်;
သင်အနက်ရောင်ကိုသုံးပါလျှင်, တကဇိမ်ခံစျေးကြီးကတ္တီပါ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအရဖြစ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ညဦးယံ၌ဆင်မြန်းနှင့်အတူကောင်းစွာရောက်ပြီး;
တစ်ဦးနူးညံ့ခြင်းနှင့်ရင်ခုန်စရာစတိုင်ရချင်သူကိုမင်းသမီးအဘို့, ဒါဟာအပေါငျးတို့သ pastel အင်္ကျီကိုကမ်းလှမ်း; lilac , ပန်းရောင်, မက်မွန်, လာဗင်ဒါ, ပူစီနံ,
အပေါက် 2017 နှင့်အတူတောက်ပနောက်ပြီးနွေးလိမ္မော်ရောင်နှင့်အဝါရောင်ကူညီပေးပါမည်အောင်;
မှုန်ခြင်းနှင့် pearlescent ကုတ်အင်္ကျီ၏အံ့မခန်းပေါင်းစပ်။ ဒါကမယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရှုနိုငျသောဆနျ့ကငျြဘကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီနှစ်နောက်ထပ်ဖက်ရှင်နှင့်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့လမ်းကြောင်းသစ် "လက်သည်းပန်းချီဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ် ကြောင်ရဲ့မျက်စိ " ။ သူက၎င်း၏မွေးရာပါ spillover အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျေးဇူးတင်အလွန်စတိုင်လှပါတယ်။ ဖက်ရှင်လနောက်ပြီး 2017 ကဒီမျိုးစိတ်ထိုကဲ့သို့သော features တွေအားဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည်:
ဒါကြောင့်မဲမှောင်တန်ချိန်ကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကောင်းစွာ, သူတို့ကထိုကဲ့သို့သောနီ, အညိုရွှေ, မှောင်မိုက်သံလွင်ပင်ကဲ့သို့, သဘာဝနီးစပ်များမှာလျှင်,
အစိမ်းရောင်နှင့်နားမှာ Emerald လူကြိုက်များမှောင်မိုက်အစိမ်းရောင်,
သက်ဆိုင်ရာများနှင့်နက်ပြာရောင်, ခရမ်းရောင်, burgundy, ချယ်ရီ, ဇီးသီး,
သတ္တုအကျိုးသက်ရောက်မှုထိုသို့မဆိုမတ်မတ်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ပါသည်, မီးခိုးရောင်ကိုငါပေးမည်။ ဒါကဒီဇိုင်းကိုရုံးသွားဘို့နှင့်ညနေပိုင်းဖြစ်ရပ်များနှင့်နေ့စဉ် output ကိုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်;
ဆန္ဒရှိလျှင်, rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်နှင့်အတူအလှဆင်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လ "ကြောင်" နောက်ပြီး 2017 သူ့ဟာသူအတွက်မှတ်မိလွယ်တဲ့ကြောင့်အဓိကအရာက, overdo သည်မဟုတ်။ ထိုကွောငျ့, တဦးတည်းအားလုံးမှာ rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်ကပ်နှင့်ရွေးချယ်အနည်းငယ်လက်ချောင်းများအပေါ်မဖြစ်သင့်;
ကောင်းစွာ Matt အရောင်တင်ဆီခြယ်သ, တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုလက်သည်းပြားကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်အဆင်းလှသောဝဲဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးဆိုရင်တော့ Matte မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာသံလိုက်အလင်းတန်းများဖြာဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ဆန္ဒရှိလျှင်, သူတို့သည်နောက်ထပ် crystals ကိုအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။
nyudovyh နှင့်အရောင်ဖျော့ဖျော့အရောင်ကိုဖန်ဆင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့လနောက်ပြီးကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်တဲ့ရင်ခုန်စရာပုံရိပ်ဖန်တီးချင်သူကိုမိန်းကလေးများသည်။ အထူးသဖြင့်ကောင်းစွာယင်း၏တိုတောင်းသောလက်သည်းပေါ်တွင်အသုံးပြုခြင်း, ဒါပေမယ့်အနုပညာကောင်းသောကြည့်ရှုသံနှင့်ရိုက်ပေးဖို့, အချို့ကိုသင်လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်:
အလွန်ပါးလွှာ "ပြောင်းပြန်" အပြုံးသုံးနေစဉ်အပေါက်, အဂန္ထဝင်လမ်းအတွက်လုပ်ရမည်,
အဆိုပါလခြမ်းလက်သည်း၏မျက်နှာပြင်မှ nyudovy အတွက်ခြယ်သသင့်ပါတယ်တဲ့အရောင်ဖျော့ဖျော့လက်သည်းဆိုးဆေးကောက်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်;
သငျသညျ nyudovyh အရောင်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့လခြမ်းလနှင့်အတူအဖြူလနောက်ပြီး, လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ယခုနှစ်တွင်နောက်ဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲကတစ်ခုပွင့်လင်းရေတွင်းများနှင့်အတူလနောက်ပြီးသုံးစွဲဖို့စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အားသာချက်ကပျော့လတ်ဆတ်နှင့်မူရင်းကြည့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါဝင်သည်။ ဒါဟာပါဝင်သည်အသုံးအများဆုံးသော, အမျိုးမျိုးသောပုံစံများအတွက်စီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်:
clearcoat တစ်ဦးရတဲ့အရာတွေနှင့်တစ်ဦးနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ် ဆိုရင်တော့ Matte ;
တပ်မက်လိုချင်သောအ crystals တစ်အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်လျှင်။
စတိုင်နှင့် inimitable နှစ်ဆ prorisovyvaniya ရေတွင်းတစ် technique ကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည့်တောက်ပလနောက်ပြီး, လှပါတယ်။ ယင်း၏ငြင်းအားသာချက်များအားဖြင့်ပါဝင်သည်:
သေဒဏ်စီရင်၏လွယ်ကူခြင်း, အတွေ့အကြုံရှိမာစတာ, ဒါပေမယ့်ပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောသာရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အလားတူ technique ကိုအတူဆန္ဒရှိလျှင်,
နှစ်ဆလနောက်ပြီးယင်းဂန္ prorisovyvaniya လခြမ်းနှင့်လမ်း "ဆန့်ကျင်" ကိုသုံးပါဖို့ဘယ်လို 2017 လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း;
လုံးဝမဆိုအရှည်ရန်လွယ်ကူဒီဇိုင်းပေမယ့်ပျမ်းမျှတစ်ဦးစံပြ option ကိုဖြစ်စဉ်းစားသည်,
ဆန္ဒရှိလျှင်, သင် sequins သို့မဟုတ် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်ကိုအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။
လက်သည်းအနုပညာဖန်တီးမှုတစ်ခု option ကိုလျှောက်လွှာရေးဆွဲဖြစ်ပါတယ်။ monograms ၏လျှောက်လွှာနှင့်အတူဒီဇိုင်းကိုလနောက်ပြီးဒီနှစ်တွင်အစွန်းရောက်လူကြိုက်များ။ အလိုရှိသောသူတို့လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဆိုလျှင်, အင်္ဂါရပ်နည်းပညာမြောက်မြားစွာလိုင်းများ၏ interweaving ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း monograms ၏အဓိကအမျိုးအစားများအနက်ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်:
ပြင်သစ် - သူတို့အကြော့ရှင်းပေးသောလက်သည်းပန်းကန်၏ဘက်မှာသာလျှောက်ထား;
မူရင်း - အားလုံးလက်ချောင်းများအတူတူပင်ဖြစ်သင့်သည်ပေါ်ဆွဲခြင်း, လက်သည်း၏တစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်မှလျှောက်ထားကြသည်;
Nouveau - တစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်မှလျှောက်ထားခြင်း, ပုံစံတစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားလက်ချောင်းအတွက်ကွဲပြားနေသည်။ ဒီနည်းပညာအခက်ခဲဆုံးဖြစ်စဉ်းစားသည်,
Monogram တစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်ကိုဖမ်းယူဒါမှမဟုတ်တစ်ခုသာအဓိကအဘို့ကိုဖုံးလွှမ်း unpainted သည် "လ" စွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်။
ဂျင်းဘောင်းဘီ - နွေဦး-နွေရာသီ 2014
Boyfriend ဂျင်းဘောင်းဘီ 2013
နွေရာသီ 2014 ခုနှစ်ပုံများ
စတိုင်ဖိနပ် - Fall-ဆောင်းရာသီ 2015-2016
ခွေးအတွက်ပန်ကရိယ - လက္ခဏာများ
Ampicillin - အသုံးပြုမှုအတွက်လက္ခဏာများ
Selena Gomez ဟာ swimsuit အတွက်သူမ၏ပုံနှင့်အတူမပျော်နေသောစိတ်ခံစားမှု bodisheymeram ကပြောပါတယ်
ယောက်ျားလေးများ2နှစ်ကစားစရာ
နှစ်ချက်နေ့စွဲ Stallone သမီးတို့
ဂေါ်ဖီထုပ်၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ - သင်ဂေါ်ဖီထုပ်အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှနှင့်သူမ၏သူချင်း
အင်္ဂတေ - နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
ပြောင်လက်တောက်ပသောအင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ရာခေလသည် Weisz သူမ၏ခင်ပွန်း Daniel Craig ကနေခွဲခြာ ပတ်သက်. ကောလာဟလများကိုငြင်းပယ်ထားပါတယ်